Switzerland oo la diiday in la mamnuuco indho shareerka (Maxaa u sabab ah go’aankan?) – SBC
Switzerland oo la diiday in la mamnuuco indho shareerka (Maxaa u sabab ah go’aankan?)
Posted by editor on Maarso 9, 2012 Comments
Dood soo noq noqotey oo mudo ka aloosneyd wadanka Switzerland oo la xiriirtay niqaamka ama indho shareerka hablaha Muslimiinta xirtaan ayaa gabi ahaanba meesha laga saarey oo la joojiyey, iyadoo sharci ahaan la isla qaatey in indho shareerka qaadayashiisa aanay aheyn mid ka mamnuuc ah dalkaasi.
Go’aankan taariikhiga ah ayaa waxaa gabi dheer laga tuuray olole iyo soo jeedin ay wadeen xisbiga dadka Swiss-ka (People’s Party Swiss) kaasi oo hordhigay baarlamanka hoose ee dalkaasi ee loo yaqaan Swiss Council of State (Ständerat).
Siyaasiga Oskar Freisinger oo ka tirsan xisbigaq Swiss People’s Party ayaa isagu soo hordhigay baarlamanka mooshinka ku aadan in guud ahaan dalka Switzerland laga mamnuuco xirashada indho shareerka ama niqaabka, laakiin aqalka hoose ee maamulada dalka ayaa ku tilmaamay talaabada lagu joojinayo indho shareerka inay dhibaato ku noqon doonto dhaqaalaha dalkaasi ka soo gala dadka dalxiisayaasha ah.
Bishii March ee sanadkii 2011 ayaa sidan oo kale golaha loo yaqaan (Ständerat) ee aqalka hoose wuxuu diidey in uu ansixiyo xirashada indho shareerka, laakiin Oskar Freisinger ayaa maalmo ka hor wuxuu baarlamanka soo hordhigay dalab kale oo ku aadan in goobaha la isagu yimaado & xarumaha gaadiidka dadweynaha laga mamnuuco niqaabka hablaha xiran, balse arintaasi ayuu ku guuldareystey mar kale iyadoo la sheegay in taasi dhimi doonto dalxiisayaasha wadankaasi imaanaya.
Hans Stöckli oo ah afhayeenka xisbiga Social Democratic Part ayaa sheegay inaan loo baahneyn in la mamnuuco indho shareerka ama niqaabka, isagoo taasi sabab uga dhigay in haween aan ka badneyn 100 ilaa 150 ay xirtaan niqaabka wadanka Switzerland kuwaasi oo badankoodu ah dalxiisayaal.
Wasiirka cadaalada Simonetta Sommaruga oo isaguna naaxnaaxinayey go’aanka lagu diiday in la joojiyo niqaabka ayuu wuxuu ku tilmaamay in hadii la mamnuuco qaadashada ama xirashada indho shareerka ay tahay mid jabinaysa xeerarka caalamiga ah gaar ahaan xeerka ama heshiiska la magac baxay Geneva Convention ee quseeya dadka qaxootiga ah, maadama qaraarkaasi waa kan lagu doonayey in lagu mamanuuco indho shareerka aanu kala saareyn kuwa qaxootiga ah iyo kuwa kale.
Talaabadan ayaa muslimiinta wadanka Switzerland waxay ku tilmaamay guuldaro ba’an oo soo gaartey siyaasiga Oskar Freisinger iyo xisbigiisa UDC oo dagaal ba’an kula jira Islaamka dalka Switzerland.